शिकारी मोडललाई प्रतिबन्ध लगाउन इन्टरनेट अभियान - ratoपिरो.com - Blog for Entertainment
by ratoपिरो · August 18, 2013
पतीसँग पैसा लिएर प्रेमीसँग विदेश घुम्नी पत्नीको पोल फेसबुकले खोलेको छ । घटना भारतको गोमती नगरमा बस्ने एक परिवारको हो । विवाहको छ महिनामा भएको यो घटना अदालतसम्म पुगेको छ ।
गोमती नगरमा बस्ने एक पूर्व अधिकारीका छोरा राहुल –परिर्वतित नाम) बेलायतको बर्कशायरमा सफ्टवेयर इन्जिनियर हुन् । उनको विवाह १३ अप्रिल २०१३ मा देहरादुनकी पूजा जोशी –परिर्वतित नाम)सँग भएको थियो । विवाहपछि राहुल मे मा बेलायत फर्किए ।
पूजाले केही समयपछि बेलायत गइन् । पतीसँग मिलेर सपिल गरिन् र अध्ययनका लागि भन्दै भारत फर्कने बताइन् । तर, अक्टोबरमा राहुलका साथीले उनीको पत्नीको फेसबुक वालमा एक युवकको तस्वीर रहेका बताए । राहुलले खोज्दै जाँदा पूजाले आफ्नो घरको नाममा फेसबुक पेज बनाएकी रहिछिन्, जहाँ न राहुललाई साथी बनाइएको थियो न उनलाई चिन्ने कोही थिए ।
राहुलले पूजाको फ्लाइट लिस्ट खोन्दा त उनी दिल्ली नफर्किएको पोल खुल्यो । राहुलले सम्पूर्ण प्रमाणसहित लखनउस्थित फेमली कोर्टमा छोडपत्रका लागि निवेदन दिएका छन् ।
Next story हङकङलाई हराउँदै नेपाल ट्वान्टी-२० विश्वकप क्रिकेटमा
Previous story योनी नभएकी किशोरीको कहानी, १७ बर्षमा बल्ल पत्तो पाइन
पत्याउनु हुन्छ, यी दुई जुम्ल्याहा हुन् भनेर ?
पत्याउनु हुन्छ ? यो हो, १९ करोडको कुकुर !!
यी हुन्, निदाएको बेला चित्र कोर्ने अचम्मका मान्छे !